Demonology Warlock - Torolàlana PVE - Patch 7.3.5 | Brujos, Game Guide | WoW Guides | WoW mpitari-dalana
Demonology Warlock - Torolàlana PVE - Patch 7.3.5
Adriel Diaz | | mpamosavy, Game Guide
Tena tsara! Manao ahoana izany sakaiza izany? Androany aho dia mitondra mpitari-dalana anao ho an'ny Warlock Demonology izay hasehoko anao izay talenta tsara indrindra ho an'ity patch, fitaovana ary fanjifana ity, ankoatry ny hafa, hahazoana ny fahafaha-manao tanteraka an'io fanaingoana io.
2 Fanovana amin'ny patch 7.3.5
12 Antontan'isa faharoa
15 Flasks sy potion
16 Torohevitra mahasoa
17 Ekipa BIS
18 Addons ilaina
Manana fahasimbana maharitra eo amin'ny fihaonana kendrena tokana.
Betsaka ny fahasimbana tavela.
Tsy dia misy fahasimbana firy amin'ny fihaonana kendrena tokana.
Simba kely sisa tavela mandritra ny fotoana maharitra.
Tsy nisy fiovana tamin'ity patch ity.
Manaraka izany dia hamela anao fomba maro hiatrehana ny fahavalonao sy ny fomba samihafa amin'ny fampivoarana ny fihaonana aho, na tanjona lehibe na fihaonana amin'ny tanjona iray fotsiny. Toy ny tamin'ny torolàlana teo aloha, safidio ireo izay tianao indrindra na manakaiky ireo mety ho azonao.
-Mifanaraka amin'ny mavo: afaka ny ho tonga tsara indrindra arakaraka ny ady, amin'ity tranga ity, izy ireo no tsara indrindra amin'ny fihaonana tokana.
-Ny kofehy manga: azonao atao ny misafidy azy ireo raha tsy tianao ireo miseho mavo, tsy hisy fahasamihafana firy amin'ny DPS, izany hoe ny safidy tsara indrindra aorian'ny mavo.
-Talenta Maitso: Ireo talenta ireo dia tsara indrindra amin'ny fanimbana betsaka kokoa amin'ny faritra, amin'ny teny hafa, fihaonana misy tanjona telo mahery.
Haavo 15: aingam-panahy mahakivy
Haavo 30: Terracechairs nohavaozina
Haavo 45: faribolana demonia
Haavo 60: fampitomboana herinaratra
Haavo 75: hoditra demonia
Haavo 90: Grimoire an'ny fanandevozana
Haavo 100: fantsom-panahy
Ny talenta misy lakroa mena dia tsy voatery ho tsy misy dikany. Manoro hevitra anao izahay hamaky ireo naoty hapetrakay etsy ambany hahafantatra ny antony namoahanay azy ireo.
Aingam-panahy mampivadi-po: Ity fahaiza-manao ity dia manome hery ny Shadow Bolt manaraka anao ary mahatonga azy ho mpilalao tampoka.
Afo aloka: Miatrika fahavoazana Xp of Shadow amin'ireo fahavalo rehetra ao anatin'ny singa 10 an'ny caster, manelingelina azy ireo mandritra ny telo segondra.
Antso demonia: Shadow Bolt dia manana vahana 20% hiteraka ny antso ho an'ny Terracecharer's izay nohavaozina mba tsy handoavana Shards Soul.
Amin'ity sampana talenta voalohany an'ny Demonology Warlock ity dia hisafidy isika Aingam-panahy mampivadi-po ho talenta tsy misy hatak'andro mba hiatrehana fahasimbana bebe kokoa amin'ny tanjona tokana. Antso demonia Mety hahasoa koa izy io, na dia matanjaka kokoa aza ilay teo aloha.
Afo aloka Tsy talenta tena ilaina izy io fa azo ampiasaina hanamboarana faritra.
Loza ho avy: Manimba ny telopolo segondra haingana ny fifanenjanana ary miantso imp iray rehefa manimba.
Terracechanters nohatsaraina: Ny fampiantsoana terrachetor dia hantsoina Imps roa.
Implosion: Ny herin'ny demonia dia mitaona ny wild Imps anao rehetra mankany amin'ilay kendrena, avy eo ataovy mipoapoaka mahery vaika amin'ny 0. Ny fahasimban'ny Shadowflame amin'ireo fahavalo rehetra ao anatin'ny kianja X.
Terracechanters nohatsaraina ampiasaina amin'ny fihaonana kendrena tokana.
Loza ho avy Izy io dia ampiasaina amin'ny fihaonana izay misy tanjona roa.
Implosion Izy io dia ampiasaina amin'ny fihaonana izay misy tanjona mihoatra ny telo.
Faribolana demonia: Miantso faribolana demonia mandritra ny 15 min, mamela anao handefa azy io indray hi-teleport ho any amin'ny misy azy ary hanaisotra ny effets miadana mihetsika. Voafetra amin'ny 1.
Fanaparitahana mahafaty: Mampihorohoro ny tanjon'ny fahavalo mandositra ary tsy mahavita azy ireo mandritra ny 3 seg. Manasitrana anao amin'ny fahasalamana X%.
Fahatezerana aloka: Mampandeha ny fahavalo rehetra ao anatin'ny Xm mandritra ny 4 seg.
Na dia tiako manokana aza ny mampiasa Fanaparitahana mahafaty satria mbola tsy manana fitaovana be loatra aho ary tonga dia atsofohan'izy ireo aho, ity sampana ity dia hisintona bebe kokoa mankany amin'ilay manokana. Faribolana demonia dia azo ampiasaina ho an'ny PVE sy PVP, amin'ity fomba ity dia afaka miandry mandra-pahatongan'ny segondra farany hanombohana ny Fivoahana korontana ary atsipazo ity fahafaha-manao ity mba tsy hanimba zavatra avy amin'ny loharano ... raha manana faritra eo ambanin'ny tongotsika isika. Fahatezerana alokaNa izany aza, mety hahasoa izy io raha mbola misy tanjona marobe vonona hamono antsika amin'ny fahaiza-manao matanjaka be.
Tanan-doza: Hand of Gul'dan izao dia hampihatra Doom amin'ny fahavalo rehetra tratrany.
Fanamafisana ny herinaratra: Ny Demower Empowerment dia manana vahana 65% hiteraka Soul Shard 1 rehefa ampiasaina mandritra ny ady.
Fijinjana fanahy: Mampitombo ny fahasimban'ny biby fiompinao sy ny biby fiompinao amin'ny X%. Maharitra 12 seg, nitombo X seg isaky ny lasibatra voakasiky ny (Fahoriana -> Fijaliana) (Demonolojia -> Fahafatesana) (Fandravana -> Immolate), hatramin'ny X s.
Tanan-doza izy no talenta tsara indrindra amin'ny toe-javatra rehetra satria mety manana fahavoazana lehibe izy. Na izany aza, amin'ny maha talenta tsy misy anao azy, Fanamafisana ny herinaratra Safidy tsara lavitra noho izany ny miaritra fahasimbana amin'ny ady. Fijinjana fanahy izy koa dia talenta tena azo iainana ho an'ny fihaonana kendrena tokana.
Hoditry ny demonia: Ny Soul Parasite anao dia mitroka indray mandeha indray amin'ny taha X% amin'ny fahasalamana farafahakeliny isaky ny 5 segondra, ary afaka mandray hatramin'ny X% ny fahasalamana faran'izay betsaka
Fihetsiketsehana mirehitra: Mampitombo ny hafainganam-pandehananao amin'ny X%, fa manimba anao kosa amin'ny X% amin'ny fahasalamanao fara-fahakeliny isaky ny 5 seg. Ny fihenan'ny hetsika dia tsy afaka mampihena ny hafainganam-pandehan'ny hetsikao ambany X% amin'ny hafainganam-pandehan'ny hetsika mahazatra. Maharitra mandra-panafoanana.
Fifanarahana maizina: Omeo sorona X% ny fahasalaman'ny demonia ankehitriny mba hahazoana ampinga miaraka amin'ny X% amin'ny fahasalamana sorona mandritra ny 20 seg. Raha tsy manana demonia ianao dia hatao sorona ny fahasalamanao. Azo ampiasaina mandritra ny fijaliana noho ny fatiantoka ny fifehezana.
Tsy holaviko fa mandray talenta mahafinaritra indrindra aho na inona na inona toe-javatra misy. Izay no antony tsy tokony hihainoanao ahy mihitsy rehefa miteny aho hoe "manokana" ... tena.
Ho ahy manokana ho an'ity sampana ity dia matetika no ampiasaiko Fihetsiketsehana mirehitra. Mandehana ianao izao ary ampiasao, ho ahy.
Ny safidy tsara indrindra ho an'ity sampan'ny talenta ity dia Hoditry ny demonia. Izy io dia ampiasaina amin'ny fihaonana izay tsy tokony hivezivezena be loatra ary ny fahasimbana azontsika dia tsy dia avo loatra.
Fifanarahana maizina amin'izao fotoana izao dia tsy manana fampitaovana lehibe. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fihaonana sasany, fa, mandritra ny fotoana fohy, dia hifidy izay roa voalaza etsy ambony isika.
Grimoire of Supremacy: Azonao atao ny mitazona ny demonia mbola lehibe kokoa mandritra ny fotoana tsy voafetra, mamela anao hiantso mpiambina apokaliptika na infernal ho biby fiompy maharitra.
Grimoire an'ny fanandevozana: Miantso demonia faharoa hiady ho anao noho ny X, miatrika fahasimbana X% bebe kokoa. Manana cooldown 1,5 min. Rehefa voaantso izy, dia hampiasa avy hatrany ny iray amin'ireo fahaizany manokana.
Grimoire an'ny sorona: Soraty ny demoniao hahazoana ny Herin'ny demonia, ka mahatonga ny ozinao indraindray hampijaly Xp koa. fahavoazana fanampiny amin'ny aloka amin'ny lasibatra sy ny fahavalo hafa ao amin'ny X yard. Maharitra 1 ora X mandra-piantsoanao demonia.
Ho an'ity sampana talenta ity dia hifidianantsika ny Grimoire an'ny fanandevozana ho an'ny lalao rehetra eo ambanin'ny tanjona telo.
Grimoire an'ny sorona Matetika izy io dia ampiasaina, amin'ity fanaingoana ity, hanaovana iraka matetika. Izy io dia talenta izay ampiasaina hiatrehana ny fahasimbana any amin'ny faritra.
Grimoire of Supremacy Tsy atolotra mihitsy izany satria tsy manofa raha oharina amin'ny talenta teo aloha. Tsara kokoa ny manana ny cd telo minitra an'ny daemon roa alohan'ity safidy ity.
Antsoy Darklook: Fiantsoana a endrika maizina mandritra ny 12 seg izay mandefa ny Lasera Maso amin'ny lasibatra rehetra voakasiky ny Doom anao, mifampiraharaha amin'ny herinao (110% hery) ho azy ireo. Simba ny aloka.
Famoahana demonia: Manovoza angovo avy amin'ny anao nahazo sada ary manipy baolina misy herin'ny demonia amin'ny lasibatra, manimba X. Fanimbana korontana. Niakatra X% ny fahavoazana ho an'ny tsirairay demonia fa miasa ianao. Spawn X Soul Shard.
Lakan-drano: Ny Soul Shard laninao dia manana vintana X% haverina amin'ny laoniny.
Antsoy Darklook Izy io dia talenta iray izay ampiasaina amin'ny fihaonana miaraka amin'ny tanjona telo mahery. Mahery be izy io.
Famoahana demonia tsy mety tsara amin'ity pool talent ity.
Lakan-drano ampiasaina amin'ny fihaonana kendrena tokana (ho an'ity spec ity).
Alohan'ny hametahana ny sary izay hanampy anao hanao ny làlana tsara indrindra amin'ny fitaovam-piadiana nataonao dia tsy maintsy mampitandrina anao aho fa amin'ny ambaratonga 110 dia hamaha mivantana ny fahalalana Artifact eo amin'ny ambaratonga faha-41 ianao, hahazoana 5.200.000% mpampitombo isa artifact. Angamba tsara kokoa ny miandry amin'ny ambaratonga avo indrindra mba hiahiahy momba ny arabe ary tsy handany fotoana be amin'izany.
Hainganana> Fitokonana manakiana => Fifehezana> faharanitan-tsaina> Fahaizana miovaova
vozon'akanjoko: Enchant neck - Mariky ny satyrita miafina o
Vozona enchant - Mariky ny hombo
Peratra enchant - Famatorana ny fahamaimaizana
Enchant Cloak - Famatorana ny faharanitan-tsaina
Ny Demonology Warlock dia tonga lafatra amin'ny fahasimban'ny faritra nefa latsaka lavitra any aoriana noho ny fahasimbana maharitra.
Ho an'ny fihodinan'ny toetra amam-panahy, dia handefa Shadow Bolt (hiteraka Fragment Soul) isika -> Antsoy amin'ny Terracechadores (isaky ny misy izany) -> Antsoy Apocalyptic Guardian (tanjona 1) / Summon Infernal (tanjona marobe) -> Grimoire: Fel Guard - > Fampaherezana demonia (rehefa niantso ny demoniantsika izahay).
Ampiasao ny Domulate Demon sy Fel Storm isaky ny misy izany.
Mampiasà Fahatezerana Demonia mba hiteraka Satram-panahy.
Hand of Gul'dan dia fahaiza-manao mahery vaika hamelezana fahasimbana be any amin'ny faritra (na tanjona kendrena tokana), noho izany dia tokony hampiasa izany isika isaky ny afaka manao izany.
Ampiasao ny fampidiran-dra rehefa mila mana izahay.
Ampiasao ny Consum Thal'kiel isaky ny misy izany.
Casco Herald Loyalty malaza
Pendant Delirium Trim Choker Varimatra
Fehin-tsoroka Fombafomba miverimberina malaza
anoloana Akanjon'ny mpangataka maloto Essence of Eonar
fonon-tanana Fonon-tànana tsy ampoizina Kin'garoth
EpicMusicPlayer: Addon hihainoana mozika natokana ho azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Demonology Warlock - Torolàlana PVE - Patch 7.3.5
Tompondaka amin'ny Arena: Midira amin'ny fanontana faharoa izao!
Void Elves - Vahao ny rojo fitadiavana